ch 1 မာကု – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မာကု၏ဧဝံဂေလိတရားကို / ch 1 မာကု
1:1 ယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိတရားကို၏အစအဦး, ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို.
1:2 ကပရောဖက်ဟေရှာယကရေးသားခဲ့သည့်အတိုင်း: "အကယ်, ငါသည်သင်တို့၏မျက်နှာရှေ့မှာငါ၏အအိန်ဂျယ်ပေးပို့, အဘယ်သူသည်သင်တို့ရှေ့မှာသင်၏အလမ်းကိုပွငျဆငျရကြလိမ့်မည်.
1:3 တဦးတည်း၏စကားသံကိုတော၌ဟစ်ကြော်: သခင်ဘုရား၏အလမ်းကိုပြင်; ဖြောင့်သည်သူ၏လမ်းခရီးပါစေ။ "
1:4 ယောဟနျသညျတော၌ခဲ့သည်, နောင်တတစ်ဗတ္တိဇံဗတ္တိဇံကိုဟောပြော, အပွစျမြား၏တစ်ဦးလွှတ်အဖြစ်.
1:5 ထိုအရပ်၌ယုဒလူအပေါင်းတို့သည်ဒေသသူ့ကိုမှ ထွက်. ယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့ကိုသူတို့အား, သူတို့ကမြစ်ကိုယော်ဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ရသည်, သူတို့၏အပွစျမြားကိုဘျော.
1:6 ယောဟနျသညျကုလားအုပျရဲ့ဆံပင်နှင့်အတူနဲ့သူ့ခါးပတ်ပတ်လည်တစ်သားရေခါးပတ်ကိုဝတ်လျက်ခဲ့သည်. ထိုမင်းသည်ကျိုင်းကောင်နှင့်တော၌ပျားရည်ကိုစားကြ၏.
1:7 ထိုမင်းသည်တရားကိုဟော, ဟုဆို: ငါ့ကိုငါ့နောက်ကြွလာထက် "တစျခုမှာပိုမိုအားကောင်း. ငါသည်သူ၏ဖိနပ်များ၏ဇာချရောက်ရှိနှင့်အသတ်လျှော့ပေးရေးမခံထိုက်ပါ၏.
1:8 ငါသညျရေအားဖြင့်သင်တို့ကိုဗတ္တိဇံကိုပါပြီ. သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, သူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သင်တို့ကိုဗတ္တိဇံလိမ့်မည်။ "
1:9 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, ယရှေုသညျဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့သားများကနေရောက်ရှိလာ. ထိုမင်းသည်ယော်ဒန်မြစ်ယောဟနျသဖြင့်ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ရသည်.
1:10 ထိုခဏ, ရေမှကွှအပေါ်သို့, သူမိုဃ်းကောင်းကင်ကိုဖွင့်လှစ်သည်ကိုမြင်ခြင်းနှင့်ဝိညာဉ်တော်သည်, ချိုးငှက်ကဲ့သို့, ဆင်း, သူနှင့်အတူကျန်ရှိနေသေးသော.
1:11 ထိုအခါကောင်းကင်ကနေအသံတစ်သံရှိ၏: "သင်ငါ၏ချစ်သားဖြစ်ကြသည်; သင်၌ငါနှစ်သက်မိပါတယ်။ "
1:13 ထိုမင်းသည်အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံးညအဘို့လွင်ပြင်၌ရှိ၏. ထိုမင်းသည်စာတန်၏စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့သည်. သူသည်ထိုအသားရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူရှိ၏, နှင့်ကောင်းကင်တမန်များကသူ့ကိုလုပ်ကျွေး.
1:14 ထိုအခါ, ယောဟနျသလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်, ယရှေုသညျဂါလိလဲပွညျသို့သှား, ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပွောခွငျး,
1:15 ဟု: "အချိန်ကိုများအတွက်မပြည့်စုံခဲ့ပြီးဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုလုနီးပွီ. နောင်တရနှင့်ဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ပါတယ်။ "
1:16 ဂါလိလဲအိုင်၏ကမ်းခြင်းဖြင့်ဖြတ်သန်း, သူရှိမုန်နှင့်သူ့ညီကိုအင်ဒရူးသည်ကိုမြင်, ပင်လယ်ထဲသို့ပိုက်ကွန်ချ, သူတို့ငါးဖမ်းသမားဖြစ်ကြသည်များအတွက်.
1:17 ထိုအယေရှုက, "ငါ့နောက်သို့လိုက်ကြလော့, သင်တို့ကိုငါယောက်ျား၏ကိုမျှားသောတံငါဖြစ်စေမည်။ "
1:18 ထိုအမှာတစ်ချိန်ကသူတို့ရဲ့ပိုက်ကွန်စွန့်ခွာ, သူတို့သညျလိုကျ.
1:19 ထိုအရပ်၌မှအနည်းငယ်နည်းလမ်းများကိုအပေါ်ဆက်လက်, သူဇေဗေဒဲ၏ဂျိမ်းစ်နှင့်သူ၏ညီယောဟနျကိုမွငျလြှငျ, နှင့်သူတို့တစ်တွေလှေမှာသူတို့ရဲ့ပိုက်ကွန်ပွငျခဲ့သည်.
1:20 ထိုခဏခေါ်တော်မူ၏. နှင့်သူ၏ငှားရမ်းထားလက်နှင့်လှေမှာသူတို့ရဲ့ဖခင်ဇေဗေဒဲ၏နောက်ကွယ်မှထွက်ခွာ, သူတို့သညျလိုကျ.
1:21 ထိုသူတို့ကပေရနောင်မြို့သို့သို့ ဝင်.. ထိုအခါဥပုသ်နေ့အပေါ်ချက်ချင်းတရားစရပ်သို့ဝင်, သူကသူတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေး.
1:22 ထိုသူတို့သညျမိမိအယူဝါဒကိုကျော်အလွန်တရာအံ့ဩကြ၏. သူကအခွင့်အာဏာရှိသူတစ်ဦးအဖြစ်ကသူတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးဘို့, နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့မကြိုက်ဘူး.
1:23 ထိုသူတို့၏တရားစရပ်၌, ညစ်ညူးသောစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူလူတရှိခဲ့သည်; သူအော်ဟစ်,
1:24 ဟုဆို: "ကျနော်တို့ကိုသင်ဘာတွေလဲ, နာဇရက်မြို့သားယေရှု? သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဖကျြဆီးခွငျးငှါလာကြပြီ? ငါသည်သင်တို့နေသောကိုသိရ: ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသောဘုရား။ "
1:25 ယရှေုသညျသူ့ကိုဤသို့သတိပေးခဲ့, ဟုဆို, "အသံတိတ် Be, နှင့်လူထဲကထွက်သွား။ "
1:26 နှင့်ညစ်ညူးသောဝိညာဉျတျော, သူ့ကို convulsing နှင့်ကျယ်သောအသံနှင့်အော်ဟစ်, သူ့ထံမှထွက်သွားကြ.
1:27 ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သူတို့အချင်းချင်းမေးလြှောကျလြှငျ, ဒါကြောင့်မိန်းမောတွေဝေ, ဟုဆို: "ဒါဘာလဲ? နှင့်ဤအယူဝါဒသစ်ကားအဘယ်သို့? အခွင့်အာဏာနှင့်အတူသူသည်ပင်ညစ်ညူးသောနတ်ပညတ်တော်မူ၏, သူတို့ကသူ့ကိုစကားကိုနားထောင်ကြလော့။ "
1:28 နှင့်သူ၏ကျော်ကြားမှုကိုလျင်မြန်စွာထွက်သွားကြ၏, ဂါလိလဲပွညျတစျခုလုံးကိုဒေသတစ်လျှောက်လုံး.
1:29 ထိုအမကြာမီတရားစရပ်မှထွက်သွားအပြီး, သူတို့ရှိမုန်နှင့်အနြေ္ဒ၏အိမ်တော်သို့ ဝင်., ယာကုပျနှငျ့ယောဟနျနှငျ့.
1:30 သို့သော်မိခင်-In-ပညတ်တရားကိုရှိမုနျ၏တစ်ဦးအဖျားနှင့်အတူမကျန်းမမာ တင်.. ထိုအမှာသူတို့သူမ၏အကြောင်းသူ့ကိုပြောပြတခါ.
1:31 နှင့်သူမ၏အနီးသို့ drawing, သူမထမွောကျ, လက်တော်ဖြင့်သူမ၏ယူပြီး. ထိုခဏဖျားနာသူမ၏ left, သူမသူတို့ကိုလုပ်ကျွေး.
1:32 ထိုအခါ, ညဦးယံအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါ, နေရောင်ကိုသတ်မှတ်ထားပြီးမှ, သူတို့ကသူ့ကိုမှရောဂါခဲ့သောသူအပေါင်းတို့နှင့်နတ်ဆိုးစွဲသောသူတို့၏ဆောင်ခဲ့ကြ၏.
1:34 ထိုမင်းသည်အမျိုးမျိုးသောရောဂါညှင်းဆဲခဲ့ကြသူအများအပြားအနာကိုငြိမ်းစေ. ထိုအခါသူသည်များစွာသောနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်, ဒါပေမဲ့သူကပြောဆိုရန်သူတို့ကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့, သူတို့ကသူ့ကိုသူသိသောကြောင့်,.
1:35 နံနက်စောစောထ, ထွက်ခွာ, သူတောအရပျသို့ထှကျသှားကွ၏, အဲဒီမှာသူကဆုတောင်းလေ၏.
1:36 ရှိမုန်, သူနှင့်အတူရှိနသောသူနှင့်ထို, သူ့နောက်မှာနောက်တော်သို့လိုက်.
1:37 ထိုသူတို့ကသူ့ကိုတွေ့ရှိရသောအခါ, သူတို့ကသူ့ကိုအားဆို၏, "လူတိုင်းကသင်ရှာဖွေလျက်ရှိ၏။ "
1:38 ထိုသူတို့အားဆို၏: "ကျွန်တော်တို့အိမ်နီးချင်းမြို့များနှင့်အမြို့မြို့သို့သွားကြကုန်အံ့, ငါသည်လည်းထိုအရပ်၌တရားကိုဟောပြောအံ့သောငှါဒါ. တကယ်ပါပဲ, ဒါကြောင့်ငါလာသောဤအကြောင်းပြချက်ပဲ။ "
1:39 ထိုမင်းသည်သူတို့၏တရားစရပ်၌ဟောပွောခွငျးနှငျ့ဂါလိလဲပွညျသားအပေါငျးတလျှောက်လုံးခဲ့သည်, နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်.
1:40 ထိုအခါနူ လာ., သူ့ကိုတောင်းပန်. ထိုအဆင်းဒူးထောက်, သူ့ကိုအားဆို၏, "သင်ဆန္ဒရှိရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအကြှနျုပျကိုစင်ကြယ်စေနိုင်ပါ။ "
1:41 ထိုအခါယေရှုသည်, သူ့ကိုသနားယူပြီး, မိမိလက်ကိုထုတ်ရောက်ရှိ. သူ့ကိုထိ, သူ့ကိုအားဆို၏: "ငါသည်ဆန္ဒရှိပါ၏. စင်ကြယ်စေ။ "
1:42 ထိုမင်းသည်ပြောပြီပြီးမှ, သူ့ထံမှထွက် သွား. ချက်ချင်းနူနာ, သူကစင်ကြယ်စေခဲ့.
1:43 ထိုမင်းသည်သူ့ကိုသတိပေး, သူကချက်ချင်းကွာသူ့ကိုစလှေတျတျော.
1:44 သူသညျအထံတော်ကပြောပါတယ်: "သင်အဘယ်သူမျှမပြောပြကြောင်းမှကြည့်ရှုပါ. သို့သော်ထိုယဇ်ပုရောဟိတ်အားကိုယ့်ကိုကိုယ်သွားနှင့်ပြသ, မောရှေသည်ညွှန်ကြားထားသောအရာသင်တို့၏စင်ကြယ်ဘို့ကမ်းလှမ်းမှုကို, ထိုသူတို့အဘို့သက်သေအဖြစ်။ "
1:45 သို့သော်ထွက်သွားကြဘဲလျက်, သူကဟောပြောဖို့နှင့်စကားလုံးဖြန့်ဖြူးရန်စတင်, သူမရှိတော့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်နေတဲ့မြို့ဝင်နိုင်နိုင်အောင်, ဒါပေမဲ့ပြင်ပမှာဆက်လက်တည်ရှိခဲ့, တောအရပ်တွင်. ထိုသူတို့ကတိုင်းဦးတည်ချက်ကနေအထံတော်သို့စုဝေးကြ၏.